शून्य डेलिभरीलाई भूगोल बाधक – Health Post Nepal
शून्य डेलिभरीलाई भूगोल बाधक
२०७५ पुष ९ गते १५:२०
रमा अर्घाली पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–६ पाटनकी स्थानीय बासिन्दा हुन् । उनको छोरा दर्पण अर्घाली २३ महिनाका भए । रमालाई सुत्केरीका लागि स्वास्थ्यसंस्था लानेक्रममा बाटोमै दर्पण जन्मिएका हुन् । ‘रातिमा व्यथा लाग्यो, सुत्केरी हुन अस्पताल जाँदै गर्दा बाबु बाटोमै जन्मियो,’ रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ठिमुरे धुस्टुङमा खोलेको गाउँघर क्लिनिकमा सेवा लिँदै गर्दा भेटिएकी रमाले भनिन् ।
छोराको तौल लिन गाउँघर क्लिनिक आएकी उनले यहाँसम्म आउन पैदल २ घण्टा समय लाग्ने बताइन् । ‘रातिमा रिजर्ब गरेको जिप आएन, बिहान मात्र आयो । जिप चढेर जाँदा ढिलो भएका कारण बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘अस्पताल नजिक छैन, पहाडको ठाउँ, हाम्रो त यस्तो बाध्यता छ ।’
पाटन गाउँमा ६० भन्दा बढी घरधुरी रहेको रमाको भनाइ छ । गाउँमा स्वास्थ्यसंस्था नहँुदा सामान्य बिरामी पर्दा पनि बतासेबजार र तानसेनसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको रमाले बताइन् । ठिमुरे धुस्टुङ गाउँघर क्लिनिककी अनमी राधिका छहरीले पाटन गाउँबाट अहिले १३ जनाले गर्भजाँचसेवा लिइरहेको बताइन् ।
तिनाउ गाउँपालिकाको पाटन र झिँगामारा गाउँका बासिन्दालाई सरकारले अझैसम्म स्वास्थ्यसेवाको पहुँचमा ल्याउन सकेको छैन । गाउँमा स्वास्थ्यचौकी नभएकाले बिरामी पर्दा उनीहरू भगवान्भरोसामा बाँचिरहेका छन् । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आएको भनिए पनि यहाँका स्थानीयले सिंहदरबार त परको कुरा, सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आउँदासमेत गाउँमा सिटामोल पाउँदैनन् ।
पाटन गाउँ तिनाउ गाउँपालिकाको वडा नं. ६ मा पर्दछ, जहाँ ६० भन्दा बढी घरधुरी छन् । तर, उक्त गाउँवासीलाई सिटामोल किन्न कम्तीमा २ घण्टा टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरू सरकारको स्वास्थ्यसेवा लिन कि त मस्याम स्वास्थ्यचौकी पुग्नुपर्छ, कि रिब्दीकोट गाउँपालिकाको क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । पाटनकी रमा अर्घालीले गाउँमा स्वास्थ्यचौकी नहँुदा उपचारका लागि गाउँ छाडेर घण्टौँ समय खर्चिनुपरेको बाध्यता सुनाइन् ।
पाटन गाउँको मात्र होइन, वडा नंं. १ झिँगामारा गाउँका स्थानीयको बाध्यता पनि उस्तै छ । साबिकको ७, ८ र ९ वडा समेटिएको उक्त गाउँका स्थानीयलाई सरकारी स्वास्थ्यसेवा लिन घण्टौँ खर्चेर रूपन्देहीको पर्रोहा स्वास्थ्यचौकी आउनुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै गाउँपालिकाभित्र सेवा लिन ३ घण्टा खर्चेर कचल स्वास्थ्यचौकी पुग्नुपर्छ ।
दोभान स्वास्थ्यचौकी, पाल्पाका इन्चार्ज सुन्दर तरामूका अनुसार तिनाउ गाउँपालिकामा चारवटा स्वास्थ्यचौकी र चारवटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छन् । तर, ती स्वास्थ्यसंस्थाले गाउँपालिकाका सबै गाउँलाई समेट्न सकेका छैनन् । कचल, दोभान, मस्याम र कोलडाँडामा स्वास्थ्यचौकी छन् भने कोलडाँडा, झुम्सा, ओखलढुंगा र बगाहामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छन् ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठले पालिकाभित्रका जनतामा स्वास्थ्यको पहुँच पुग्न नसकेको तथ्य स्वीकार गरे । उनले आधारभूत स्वास्थ्यको पहँुच पुर्याउनका लागि आफूहरूले स्वास्थ्य एकाइको अवधारणा अगाडि ल्याएको बताए । ओखलढुंगा र बगाहामा गाउँपालिकाको बजेटले सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरिसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । भौगोलिक कठिनाइ र छरिएका गाउँका कारण जनतालाई सुविधा दिन कठिनाइ भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । आउने तेस्रो चौमासिकमा चरचरे गाउँ र दोस्रो चौमासिकमा बेरुवा गाउँमा दुई स्वास्थ्य एकाइ थपिने श्रेष्ठले बताए । झिँगामारा र पाटन गाउँमा पनि सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइको माग भएको र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको उनले बताए ।
अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका १० वटा वडामा ७ वटा स्वास्थ्यचौकी, ३ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ गरी १० वटा स्वास्थ्यसंस्था छन् । त्यसमध्ये खिल्जी स्वास्थ्यचौकी र धारापानी स्वास्थ्यचौकीमा सुरक्षित सुत्केरीसेवा र सुरक्षित गर्भपतनसेवा उपलब्ध छ । गाउँपालिकाले ढाकावाङ स्वास्थ्यचौकी र धनचौर स्वास्थ्यचौकीमा सुरक्षित सुत्केरीसेवा सुरु गर्दै छ । अरू वडामा सुरक्षित सुत्केरीका लागि भूगोल बाधक बनेको छ ।
स्थापित ३ सामुदायिक एकाइमध्ये धारापानीको एकाइ केन्द्रीय कार्यक्रमअन्तर्गत स्थापना गरिएको हो भने ढाकावाङ र नुवाकोटमा नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट सुरु गरिएको हो । ढाकावाङमा नगरपालिकाका २ वटा वडा रहेकामा एउटामा स्वास्थ्यचौकी छ भने अर्कोमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमार्फत सेवा दिइएको हो । नगरका ११ वटा गाउँ स्वास्थ्यसंस्थाबाट टाढा भए पनि ती गाउँमा गाउँघर क्लिनिक राखिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य सहसंयोजक सिद्धार्थ आचार्यले जानकारी दिए । सबै वडाका स्वास्थ्यसंस्थामा सुरक्षित सुत्केरीसेवा नहुँदा र भूगोलका कारण शून्य डेलिभरी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।